Ikhabethe Lakudala w/ Indawo Yomlilo Yegesi neYadi Enkulu - Hamba uye Echibini, Izinja Siyakwamukela!
U-Vacasa Oregon uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
I-Mount Bonneville itholakala ohlangothini lwe-resort lwe-Wallowa Lake, ngakho-ke uzoba phakathi kwebanga lokuhamba elilula le-Wallowa Lake Tramway, i-Wallowa Lake Pack Station, zonke izinhlobo zezindlela zokuhamba izintaba, kanye nenani leminye imisebenzi. Ingaphandle elihle lokhuni kanye nengaphakathi le-knotty pine kukwenza uzizwe sengathi uhlehla ngesikhathi - kodwa ngezinsiza zesimanje zokukubingelela uma usulapho.
Leli khabethe elithokomele linikeza indawo eningi yohambo lomndeni noma impelasonto yothando. Jabulela indawo yomlilo yegesi ehlala mahhala egumbini lokuphumula ebeka umoya wokuphumula, ukukhanya okukhanyayo okuncane okumnandi ngaphezu kombhede wegumbi lokuphumula, kanye nekhishi elincane kodwa elinamandla elinazo zonke izinsiza ozidingayo ukuze upheke ukudla kwakho futhi ujabulele isikhathi senu ndawonye. Igumbi le-TV alikho egumbini lokuhlala, linikeza umnyango ovalekayo wobumfihlo obengeziwe kanye nosofa omncane wezingane nentsha. Ikamelo lokulala linombhede wenkosi kanye nokufinyelela kalula eshaweni yokungena endlini yokugezela.
Ayikho isevisi yekhebula
Ilungele izinja ngenkokhelo yasebusuku
Umbhede kanye ne-sofabed kuvulandi wokulala zilungele izingane kuphela
Akukho mlilo noma izindawo zokucisha umlilo ezivunyelwe ngenxa yendawo enamapulangwe esindayo kanye nemikhawulo yesifunda
Ungeqi imingcele yokuhlala noma yokupaka nganoma yisiphi isikhathi
Uma ufuna indawo yokuhlangana nabanye abaseduze, sicela usebenzise i-Wallowa Lake State Park, i-Little Alps Day Use Area, i-Joseph City Park, kanye nezindawo ezisenyakatho naseningizimu zokusetshenziswa/ukwethulwa kwezikebhe.
Amanothi Okupaka: Kukhona indawo yokupaka yamahhala yezimoto ezi-2. Kukhona ukupaka izimoto ezimbili. I-4X4 enconywe kakhulu, amaketango kanye/noma amathayi adonsayo okushayela ebusika.